Wzọ 5 iji mezie ahịa na ire ahịa iji bulie Ego | Martech Zone
Oge ọ bụla anyị weere ndị ahịa, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịghọ onye ahịa. Anyị agaghị akpọ ndị ọrụ ahịa ha ozugbo. Anyị ga-edebanye aha maka akwụkwọ ozi email ha (ọ bụrụ na ha nwere otu), budata ihe onwunwe, dozie ngosi, wee chere ka ndị otu ahịa rute anyị aka. Anyị ga-atụle ohere dị ka a ga - asị na anyị bụ onye ndu, ma gbalịa iso ha gafee usoro ahịa niile.
Nzọụkwụ ọzọ anyị ga - eme bụ ịjụ otu ndị na - azụ ahịa otu ụdị ahịa ahịa a si adị. Anyị na-enyocha ahịa azụmaahịa nke ahịa ahụ mepụtara. Na mgbe ahụ anyị na-atụnyere abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga - eju gị anya, ugboro ole anyị ga - ahụ ọmarịcha ahịa ahịa ama ama emere maka ndị otu ahịa… mana emesia egosiri ihe ngosi dị egwu nke dị ka ọ mepụtara ngwa ngwa nkeji 10 tupu oku. N'ihi gịnị? Maka na otu ire emebere anaghị arụ ọrụ.
Usoro a abụghị igbu oge - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-enye ọdịiche dị egwu n'etiti ndị otu abụọ ahụ. I nwedịrị ike ịchọrọ ịchọpụta usoro gị. Anyị anaghị ekwupụta nke a iji kwuo na ahịa na azụmaahịa adịghị arụ ọrụ, ọ na-abụkarị na otu ọ bụla nwere ụzọ na mkpali dị iche iche. Nsogbu mgbe oghere ndị a na-eme abụghị na ahịa ahụ na-egbu oge… ọ bụ na ndị na-ere ahịa anaghị etinye ihe kachasị mma iji zụlite ma mechie ire ere ahụ.
Anyị ebipụtala ajụjụ ndị ị nwere ike ịjụ n'ime nzukọ gị lelee ahia na ahia gi. Brian Downard, Co-guzobere na Onye Mmekọ na ELIV8 Business Strategies ejikọtala ihe ndị a Usoro 5 iji meziwanye ahia na ahia giNa mkpokọta ebumnobi mbo mbuli revenue.
Ọdịnaya kwesịrị ịchụpụ ahịa, ọ bụghị naanị ịmara nke ọma - gunye ndi otu ahia gi n’ime ihe ichoro ichoro ichoputa ohere na nmegide ndi otu ahia gi na-anu.
Ebumnuche ịzụlite ndepụta ndu gị - a na-akpali nkwalite ire ahịa ngwa ngwa, yabụ ha nwere ike ịhapụ ahịa ahịa na-aba uru nke nwere ike iwe ogologo oge.
Kọwaa njirisi ruru eru (SQL) njirisi - ahia na-ebugharị ndebanye aha ọ bụla dịka ụzọ, mana ịntanetị na -emepụta ọtụtụ ụzọ erughị eru.
Mepụta nkwekọrịta ọkwa ọrụ n'etiti ahịa na ahịa - ngalaba ahia gị kwesịrị ịgwọ ndị otu ahịa gị dịka ndị ahịa ha, ọbụnadị a nyochara ha etu esi ere ahịa ha.
Melite ọkwa ahịa gị na ihe ngosi gị - tinye ego na sistemụ azụmaahịa azụmaahịa nke na-anwale ma lelee ihe azụmaahịa ọhụụ.
Enwere ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime iji nyere aka kwado ahịa na ahịa. Kekọrịta Nrụ Ọrụ Ngosipụta (KPIs) dị ka ohere ndị emepụtara ma mechie / merie azụmaahịa na ahịa ha dị mkpa na aka ahịa nwere ike inyere aka iji anya nke uche hụ usoro aghụghọ na-eme nke ọma. Nwedịrị ike ịchọrọ ịdepụta dashboard ịkọkọrịta iji soro agam n’ihu ma kwụghachi ndị otu ụgwọ mgbe emezuru ihe mgbaru ọsọ.
Gbaa mbọ hụ na onye ahịa ọrịre na ọrịre ọre nwere ọhụụ ya ma debanye aha na atụmatụ ibe ya. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye aha onye isi ego na-ahụ maka ego iji hụ na nhazi ahụ.
Tags: nhazicontent Marketingmarketingruru eru na-edugaEgoNkwado ire ahịaire ahiaitinye n'ọnọdụ ahịa ahịaahịa ruru eru